Shenzhen TryAce Technology Co., Ltd yenye abenzi eziphambili zokuhlanganisa R & D, imveliso kunye ukuthengiswa cam ezimbini dash, 4k isikhewu cam, wifi dash cam, cam dash encinane, efihliweyo isikhewu cam, isipili camera ....
Siye kumisa iseti inkqubo yolawulo lomgangatho, Okwangoku, kufuneka abasebenzi abangaphezulu kwama-10 QC, yaye abe ngumphelelisi ngokungqongqo iimveliso ISO9001.Our Zukile izatifiketi CE, FCC, CCC, ROHS, kunye IP68. Thina kweminyaka eli-15 yamava ngaphandle, ngokubonelela ngeenkonzo ukwandisa imiyalelo OEM kunye ODM e Melika, eYurophu, eMntla Melika kunye mpuma Asia. Kwaye iqela lethu urhwebo ikulungele ukuze ndilungiselele nina.
"Made eqhelekileyo ukuba ingaqhelekanga" i ngcamango sabaphathi ukuba niqhubela phambili kwaye enze phambili. Ngelo xesha, ukuba usukelo wonke umntu TryAce ubasukelayo. Sikholelwa: Xa bume ababefuna ukwenza nentlalo entle yoluntu kunye nokhuseleko China kunye nenkxaso kunye nokhuthazo sifumana abaninzi abathengi abanyanisekileyo TryAce s kwaye zonke yokuhamba zobomi, thina, njengoko itshantliziyo entsha, uya uwasebenzise ngokupheleleyo ikomkhulu, ubugcisa, italente kunye nolawulo kufuneka ukuba nesibindi ngokuxilonga innovating iimveliso ezintsha, ukwenza igalelo ngakumbi ingomso ngcono ilizwe lethu kunye nokhuseleko ezindleleni yehlabathi.